Fananganana Forum Mobcasting · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Marsa 2018 19:15 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Aogositra taona 2005 ny lahatsoratra teny Anglisy)
Noho ny fanehoan-kevitra tsara azoko momba ny famoronana paikady fandraketana sy fandraisam-peo amin'ny finday amin'ny alalan'ny open source mora vidy, dia nametraka lisitra mailaka vaovao sy vondrom-piarahamonina Habaka ho an'ireo olona liana amin'ny fanatanterahana izany aho. Efa misy ny fitaovana maimaim-poana toy ny audioblogger (bilaogera am-peo) sy audlink (rohy am-peo) izay ahafahanao mandrakitra feo amin'ny findainao, fa samy mila antso an-tariby an-davitra any Etazonia izy roa tonta, ary samy tsy mamela anao hihaino ny fandraketam-peo amin'ny findainao. Te-hampivelatra fitaovana afaka hapetraka any amin'ny faritra rehetra manerana izao tontolo izao aho, noho izany azo atao amin'ny antso an-tariby ao an-toerana avokoa izany rehetra izany.
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny mobcasting ianao, tsidiho azafady ity bilaogy izay nosoratako tamin'ny Janoary lasa teo ity, mitondra ny lohateny hoe Raha Mitondra Any Amin'ny Mobcasting ny Podcasting (Fandraketam-peo) amin'ny Finday raha hijery fanombohan'izany rehetra izany.
Hifantoka fotsiny amin'ny tetikasa ny lisitra mailaka; tokony ho liana amin'ny fandraketam-peo amin'ny finday ireo olona miditra ao amin'ny lisitra ary vonona hanampy anay hanatanteraka ity tetikasa ity.
Mba hidirana amin'ny lisitra, mandefasa mailaka ao amin'ny mobcasting-subscribe [[at]] yahoogroups . com, izay esorina ny tahala sy ny fononteny. Na, afaka mitsidika ny pejy voalohan'ny lisitra Mobcasting ianao.
Mandritra izany fotoana izany, namorona vondrom-piarahamonina DDN ihany koa aho izay azo ampiasaina amin'ny sehatry ny asa. Ahitana gazetim-pitantanana, fizarana antontan-kevitra sy famoahana bilaogy ny toeram-piasana. Afaka mandefa loharano sy fitaovam-baovaon'ny habaka, bilaogy na tahiry ao amin'ity tranonkala azon'ny daholobe idirana ity ireo mpikambana ao amin'ny vondrona. Azontsika ampidirina ao amin'ny tranonkala ihany koa ny vaovao, ny zava-mitranga sy fanangonam-baovao raha toa ka lasa mahasoa amin'ny lafiny sasany izy ireo.
Miandrandra fatratra ny fanatanterahana izany! -andy